फेसवुकका कारण ११ वर्षकी छोरीले जिवन त्याग गरिन् भन्दै एउटी आमाले दिइन् फेसवुक विरुद्ध उजुरी – List Khabar
Home / समाचार / फेसवुकका कारण ११ वर्षकी छोरीले जिवन त्याग गरिन् भन्दै एउटी आमाले दिइन् फेसवुक विरुद्ध उजुरी
admin January 24, 2022 समाचार Leaveacomment 38 Views
एजेन्सी । आफ्नो नाबालक छोरी सामाजिक सञ्जालको ल त मा लागेर जिवन त्याग गरेको भन्दै एक आमाले सामाजिक सञ्जाल विरुद्ध उजुरी दिएकी छन् । अमेरिकाकी एक आमाले आफ्नी छोरीले जिवन त्याग गर्नुको कारण फेसबुक र स्नापच्याट रहेको भन्दै मु द्दा हालेकी छिन् । उनले मेटा र स्नापच्याट विरुद्ध मु द्दा हालेकी हुन् ।
उनकी ११ वर्षीया छोरी सामाजिक सञ्चालको ल त मा परेर जिवन त्याग गरेको ति आमाको आरोप छ । उनले त्यसरी किशोरीलाई गलत ल त लगाउने सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनुपर्ने बताएकी छन् । गत जुलाईमा ११ वर्षीया सेलिनाको सामाजिक सञ्चालको ल त भएपछि जिवन त्याग गरेकी हुन् ।
इनग्याजेटसँग कुरा गर्दै स्नापच्याटले सेलिनाको मृत्यु प्रति दुःख जाहिर गर्दै जहिले पनि आफ्नो प्रयोगकर्ता सुरक्षित ढगंले एप चलाउन भन्ने चाहने बताएको छ । सेलिनाकी आमा टयामी रोड्रीगेजले एपमा प्यारेन्टल कन्ट्रोल र बालबालिकाको उमेर भेरिफाई गर्ने केही पनि नरहेको भनेर गुनासो पनि राखेकी छिन् ।
उनले एपको ल त ले गर्दा छोरी सुत्न नसक्ने, डिप्रेसनको शि का र, स्कुल जान नमान्ने, खाना नखाने गर्दा गर्दै अन्तयमा जिवन नै त्याग गरेको बताएकी छिन् । यस्तो अरु बालबालिकासँग नि हुन सक्ने चेतना फैलाउन रोड्रीगेजले उजुरी गरेकी हुन् ।
यो पनि, ह्वाट्सएपले एन्ड्रोइडबाट आईफोनमा च्याट सार्न मिल्ने फिचर ल्याउने भएको छ । डब्लुएबेटा इन्फोको अनुसार ह्वाट्सएपले एन्ड्रोइडबाट आईफोनमा च्याट सार्न मिल्ने फिचरको विकास गरिरहेको छ । डब्लुएबेटा इन्फोले सेयर गरेको स्क्रीनसट अनुसार यो फिचरले च्याट सार्न अघि प्रयोगकर्तासँग स्वीकृति माग्ने गर्दछ ।
एन्ड्रोइडमा यूएसबी टाइप सी प्रयोग गरेर सजिलै च्याट सार्न सकिन्छ तर एन्ड्रोइडबाट आईफोनमा अहिलेसम्म च्याट कन्टेन्ट सार्न नमिलेको हुँदा यो फिचर ल्याउन लागिएको हो । त्यस्तै ह्वाट्सएपले डेस्कटप र वेब प्रयोगकर्ताका लागि पनि टू स्टेप भेरिफिकेसन फिचर पनि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
Previous एक्कासी घट्यो सुनको मूल्य , हेर्नुहोस कति पुग्यो?
Next नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)